Izmir Metro wuxuu gaarayaa 9 milyan oo rakaab ah bil kasta | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirIsgaadhsiinta İzmir ayaa gaari rakaab ah oo rakaab ah oo rakaab ah bishiiba
21 / 05 / 2016 35 Izmir, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Metro, TURKEY
İzmir Metro waxay gaartay 9 milyan oo rakaab ah bil kasta: İzmir Metro, 16. u dabaaldegaa da'deeda leh diiwaan. 22 May Tareenka dhulka hoostiisa, oo safarkiisii ​​ugu horreeyay ku tegay May 2000, wuxuu sare u kacay tirada 693 kun oo rakaab ah bil kasta ilaa 9 milyan maanta. 16 Izmir Metro, oo bishiiba mar kordhisay masaafadeeda billaha ah ee 9 times iyo 5 times, waxay ku gaadhay kobac xasilloon iyadoo saldhigyadeeda cusub iyo maraakiibta la cusbooneysiiyay.
İzmir Metro, oo ka kooban tallaabada ugu horreysa ee gaadiidka rakaabka ee rakaabka ee magaalada İzmir, ayaa qortay sheeko guul ah oo dhab ah oo ay la socoto tirooyinka koritaanka ee ay gaareen tan iyo safarkiisii ​​ugu horreeyay ee 22 May 2000. Kordhinta tirada rakaabka ee loo arko inay tahay tusaha ugu weyn ee guusha nidaamka tareenka shirkadaha ganacsiga dadweynaha ayaa cadeeyay sida ay uga xunyihiin magaalada İzmir Metro. 2000 Bishii Juun, 693 Izmir rakaab ah oo wata kun rakaab ah, 2016 bishii Abriil, iyagoo sidda qiyaastii 9 milyan oo rakaab ah waxay kordheen kun boqolkiiba 256. Si kale haddii loo dhigo, tirada rakaabka ee dhulka hoostiisa mara ee 16 sanadkiiba waxay kordheen qiyaastii 13 jeer.
Wadarta tirada 2000 kun ee 27 kiiloomitir waxay ku safartay dhammaan duulimaadyadii la sameeyay bishii Juun ee 742, waxayna tiraddani gaartay 2016 kun oo kiiloomitir 236 kii bishii Abriil ee 233. Heerka kororka aaggan wuxuu ahaa boqolleyda 852. Izmir Metro 2000 2 kun oo 522 duulimaad ah bishii Juun, 510 kun boqolkiiba boqolkiiba bishii Abriil ee sannadkan, tirada duullimaadyada 12 kun ee 873 ayaa la gaarey. 16 İzmir Metro, oo bilaabay ka shaqeynta xarunta 10 iyo gawaarida 45 sanado ka hor, hadda waxay ku bixisaa adeegga hawlgalka saldhigga 17; Tirada gawaarida ayaa kordhay boqolkiiba 93 waxayna gaareen 87. Si kastaba ha noqotee, 95, oo hadda socda, ayaa kordhin doonta boqolleydan iyada oo lagu darayo gaadiidka cusub ee lagu soo rogay maraakiibta illaa sannadkan.
Ka qaybqaadashada gobolka Faransiiska ilaa afar rakaab ah oo ka hortagaya xasuuqii tareenka
48 Isugeynta Gaadiidka Saacadaha ee Giriigga